Business Security Premium​ Security - Bitdefender Myanmar
ခြိမ်းခြောက်မှု ဖြစ်စဉ် တစ်ခုလုံးအား ဖွင့်ဆိုသတ်မှတ်ရန် စီမံဖန်တီးထားသော အဆင့်မြင့် ကာကွယ်မှု၊ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှု နှင့် တုံ့ပြန်မှု တို့တွင် ထိပ်ဆုံး
နည်းပညာများ နှင့် ARCHITECTURE
သတ်မှတ်ချက်များ နှင့် အမေးအဖြေများ
Bitdefender Business Security Premium​
သင့်လုပ်ငန်းအား ရှုပ်ထွေးသော ဆိုက်ဘာခြိမ်းခြောက်မှု အလုံးစုံရန်မှ မြန်နှုန်း၊ တိကျမှု နှင့်အတူ ကာကွယ်ပေးသည်။
Business Security Premium​ သည် single modular platform တစ်ခုထဲတွင် ကြိုတင်ကာကွယ်မှု၊ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှု၊ ကုသဖြေရှင်းခြင်း နှင့် မြင်သာမှုတို့အား ပေးသည့် အလွှာလိုက် မျိုးဆက်သစ် architecture တစ်ခုကို ပေးသည်။
သာမန် endpoint လုံခြုံရေး tool များအတွင်း ထိုးဖောက်ဝင်ရောက် လေ့ရှိသည့် အလွန်ရှုပ်ထွေးသော ဆိုက်ဘာတိုက်ခိုက်မှုများထံမှ သင့်ကိုယ်တိုင်အား ထိထိရောက်ရောက်ကာကွယ်ရန် သင့်အနေနှင့် အဆင့်မြင့် machine learning, ပြုမှုပိုင်းဆိုင်ရာ analysis, anti-exploit နှင့် ပေါင်းစည်းထားသည့် sandbox တို့ပါဝင်သည့် အဆင့်ပေါင်းများစွာ signature-မလိုသော နည်းပညာများနှင့်အတူ အလွှာလိုက် ခုခံချဉ်းကပ်မှုတစ်ခု လိုအပ်သည်။
အရှုပ်ထွေးဆုံးသော ခြိမ်းခြောက်မှုများရန်မှ ကာကွယ်ခြင်း
Endpoint လုံခြုံရေးအတွင်း ထိုးဖောက်ဝင်ရောက်သည့် ခြိမ်းခြောက်မှုများအား စုံစမ်းထောက်လှမ်းသည်။
Pre-execution ၌ တိကျသော ကြိုတင်ကာကွယ်မှု
အဆင့်မြင့် hacking tool များ၊ exploit များ၊ ransomware, gray-ware နှင့် PUP များ အပေါ် အထူးအာရုံစိုက်ခြင်း
အလိုအလျောက် ချက်ချင်း လုပ်ဆောင်မှုများ
အဆင့်မြင့်တိုက်ခိုက်မှုများကြောင့်ဖြစ်သော ပျက်စီးမှုများအား ကြိုတင်ကာကွယ်ခြင်း
အလိုအလျောက် sandbox ပို့ခြင်း
အန္တရာယ်ရှိ ဖြစ်စဉ်များအား အဆုံးသတ်ပေးခြင်း
အန္တရာယ်ရှိ ပြောင်းလဲမှုများထံမှ ပြန်လှည့်ပေးခြင်း
တိုးမြှင့်ထားသည့် အကြောင်းအရာ နှင့် သိမြင်မှု
အဆင့်မြင့် ခြိမ်းခြောက်မှုများ အပေါ် ပိုမိုကောင်းမွန်သည့် အကြောင်းအရာအား ပေးခြင်း
ခြိမ်းခြောက်မှုများအား ခြိမ်းခြောက်မှုလုပ်ဆောင်ချက်များနှင့် ဆက်သွယ်ပေးခြင်း
ရှေ့ဆက် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု နှင့် ရှေ့ဆက်လုပ်ဆောင်ချက်များ အတွက် တိုးမြှင့်ထားသော endpoint optics
သံသယဖြစ်ဖွယ် ခြိမ်းခြောက်မှုများ (HD အစီရင်ခံချက်များ) အား ဖော်ထုတ်ပေးခြင်း
သွင်ပြင်လက္ခဏာများ နှင့် အကျိုးသက်ရောက်မှုများ
MACHINE LEARNING သည် အဆင့်မြင့် တိုက်ခိုက်မှုများအား ကြိုတင်ခန့်မှန်းပေးပြီး တားဆီးရပ်တန့်ပေးသည်။
အကြီးမားဆုံးသော လုံခြုံရေး သတင်းအချက်အလက် platform သည် ပေါ်ထွက်နေသည့် ခြိမ်းခြောက်မှုများအား ဖြေရှင်းရန် နှင့် သိပြီးသားဖြစ်စေ၊ မသိသေးသည်ဖြစ်စေ တိုက်ခိုက်မှုနှစ်မျိုးစလုံးရန်မှ တပြိုင်နက်ကာကွယ်မှု ပေးရန် endpoint ပေါင်း ၅၀၀ မီလီယံကျော်ထံမှ အချိန်နှင့်တပြေးညီ အချက်အလက်များအား စုဆောင်းသည်။
HyperDetect™ သည် PRE-EXECUTION အဆင့်တွင် တိုက်ခိုက်မှုများအား တားဆီးရပ်တန့်ပေးသည်။
Bitdefender HyperDetect တွင် machine learning ပုံစံများ နှင့် လှို့ဝှက်တိုက်ခိုက်မှု စုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်း နည်းပညာ တို့ပါဝင်သည်။ ၎င်းသည် အဆင့်မြင့်တိုက်ခိုက်မှုများနှင့် သံသယဖြစ်ဖွယ်လုပ်ရပ်များကို pre-execution အဆင့်တွင် စုံစမ်းရန် အထူးစီမံဖန်တီးသည့် ထပ်ဆင့် လုံခြုံရေးအလွှာတစ်ခု ဖွဲ့တည်ထားသည်။
SANDBOX ANALYZER သည် ဦးတည်တိုက်ခိုက်မှု စုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်းအပေါ် တိုးမြှင့်ပေးသည်။
Bitdefender Sandbox Analyzer သည် cloud sandbox ထံ ထပ်ဆင့် analysis လုပ်ရန်လိုသည့် ဖိုင်များအား အလိုအလျောက် ပို့ခြင်း နှင့် ဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ်မူတည်သော ကုသဖြေရှင်းခြင်းလုပ်ရပ် ယူခြင်းအားဖြင့် အဆင့်မြင့် တိုက်ခိုက်မှုများ၏ pre-execution အဆင့် စုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်းကို ပေးသည်။
ဖြစ်စဉ် စုံစမ်းထောက်လှမ်းသည့်အရာမှ ဖိုင်မပါသည့် တိုက်ခိုက်မှုများအား စုံစမ်းစစ်ဆေးပြီး ရပ်တန့်ပေးသည်။
Bitdefender ဖြစ်စဉ်ထောက်လှမ်းသည့်အရာသည် on-execution အဆင့်တွင် ဘယ်သောအခါကမှမမြင်ဖူးသည့် ခြိမ်းခြောက်မှုများ၏ရန်မှ ကာကွယ်ခြင်းအား ပေးသည့် အပြုအမူ ကွဲပြားမှု စုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်း နည်းပညာ တစ်ခု ဖြစ်သည်။
Patch ထိန်းချုပ်မှု၊ Disk အပြည့် စကားဝှက်ပြုခြင်း၊ ဝက်ဘ်ခြိမ်းခြောက်မှု ကာကွယ်ခြင်း၊ Firewall ၊ အက်ပလီကေးရှင်း နှင့် စက် ထိန်းချုပ်မှု – စသော သွင်ပြင်များစွာတို့သည် တိုက်ခိုက်မှု မျက်နှာပြင်အား လျော့နည်းစေရန် အတူတကွ လုပ်ဆောင်ကြသည်။
Bitdefender မှတ်ဉာဏ်ကာကွယ်ခြင်းအလွှာသည် on-execution အဆင့်တွင် browser နှင့် အက်ပလီကေးရှင်း အားနည်းချက်များအပေါ် ပစ်မှတ်ထားသည့် သိပြီးသားဖြစ်စေ၊ မသိသေးသည်ဖြစ်စေ exploit များ၏ရန်မှ ကာကွယ်ပေးသည်။
ရှုပ်ထွေးသော ခြိမ်းခြောက်မှုများ နှင့် မသိသော Malware အလုံးစုံတို့အား စုံစမ်းထောက်လှမ်းပြီး ကြိုတင်ကာကွယ်သည်။
Elite သည် ransomware အပါအဝင် ရိုးရာ endpoint ကာကွယ်ခြင်း solution များအတွင်း ထိုးဖောက်သည့် အဆင့်မြင့် ခြိမ်းခြောက်မှုများ နှင့် မသိသော malware တို့အား တိုက်ထုတ်သည်။ PowerShell, script-အခြေပြု ဖိုင်မပါ တိုက်ခိုက်မှုများ နှင့် ရှုပ်ထွေးသော malware အစရှိသည့် အဆင့်မြင့် တိုက်ခိုက်မှုများကို execution မစတင်ခင်မှာပင် စုံစမ်းထောက်လှမ်းနိုင်ပြီး တားဆီးရပ်တန့်နိုင်သည်။
ဖိုင်မပါ Malware အား စုံစမ်းထောက်လှမ်းပြီး ရပ်တန့်သည်။
ဖိုင်မပါ malware တိုက်ခိုက်မှုများသည် အန္တရာယ်ရှိသောကုဒ် အား မှတ်ဉာဏ်ထဲတွင် တိုက်ရိုက် လုပ်ဆောင်စေသည်။ Disk ပေါ်တွင် ဖိုင် မရှိနေသည့်အတွက် ဖိုင် analysis အတွက် ရေးဆွဲထားသော AV solution များမှာ ဤတိုက်ခိုက်မှုအမျိုးအစားအပေါ် မမြင်စွမ်းနိုင်တော့ပေ။ Bitdefender သည် ဖိုင်မပါ တိုက်ခိုက်မှုများအား စုံစမ်းစစ်ဆေး၊ ပိတ်ဆို့၊ ကြားဖြတ်တားဆီးရန် အဆင့်မြင့် Anti-Exploit, HyperDetect™, ဖြစ်စဉ်ထောက်လှမ်းသည့်အရာတို့နှင့်အတူ ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်သည်။
Macro နှင့် Script-အခြေပြု တိုက်ခိုက်မှုများအား ရပ်တန့်သည်။
ခြိမ်းခြောက်မှု ကုသဖြေရှင်းခြင်း၊ ထိန်းချုပ်မှု နှင့် တုံ့ပြန်မှုတို့အား အလိုအလျောက်ဖြစ်စေသည်။
ခြိမ်းခြောက်မှုတစ်ခုအား စုံစမ်းထောက်လှမ်းမိသည်နှင့်တပြိုင်နက် Business Security Premium​ သည် ဖြစ်စဉ်ရပ်တန့်ခြင်း၊ ယာယီစောင့်ကြပ်ကြည့်ခြင်း၊ ဖယ်ရှင်းခြင်း နှင့် အန္တရာယ်ရှိသောပြောင်းလဲမှုများမှ ပြန်နောက်လှည့်ခြင်းတို့ ပါဝင်သည့် လုပ်ရပ်များအားဖြင့် ၎င်းအား ချက်ချင်းပယ်ထုတ်သည်။ ၎င်းသည် ကမ္ဘာအနှံ့ အလားတူတိုက်ခိုက်မှုများမှ ကြိုတင်ကာကွယ်ပေးရင်း GPN, Bitdefender ၏ cloud အခြေပြု ခြိမ်းခြောက်မှု intelligence ဝန်ဆောင်မှုတို့နှင့်အတူ အချိန်နှင့်တပြေးညီ ခြိမ်းခြောက်မှုသတင်းအချက်အလက်များအား မျှဝေပေးသည်။
တိုးမြှင့်ထားသော ခြိမ်းခြောက်မှုအကြောင်းအရာ နှင့် မြင်သာနိုင်စွမ်း
သံသယဖြစ်ဖွယ်လုပ်ရပ်များအား ခွဲခြမ်းသတ်မှတ်၊ တင်ပြနိုင်သည့် GravityZone’s Business Security Premium​ ၏ တမူထူးခြား စွမ်းဆောင်နိုင်စွမ်းသည် သံသယဖြစ်ဖွယ် စနစ်လုပ်ဆောင်ခြင်းတောင်းဆိုမှုများ၊ command နှင့် ထိန်းချုပ်မှု စင်တာများထံ ကျူးကျော်သည့် လုပ်ရပ်များ နှင့် ချိတ်ဆက်မှုများ အစရှိသည့် အန္တရာယ်အပြုအမူအပေါ် စောစီးစွာ သတိပေးခြင်းကို admin များအား ပေးသည်။
လုပ်ဆောင်မှုဆိုင်ရာ ထိရောက်မှုအား တိုးမြှင့်ပေးသည်။
Bitdefender ၏ တစ်ခုတည်းတွင် ပေါင်းစည်းထားသည့် endpoint လုံခြုံရေး agent သည် agent နွမ်းလျမှု ကို ပယ်ရှားပေးသည်။ Modular ဒီဇိုင်း သည် အမြင့်ဆုံး လိုက်လျောညီထွေဖြစ်ခြင်း အား ပေးထားပြီး administrator များအား လုံခြုံရေး စည်းမျဉ်းများကို သတ်မှတ်နိုင်စေသည်။ GravityZone သည် install လုပ်ခြင်း package အား အလိုအလျောက် ပြင်ပေးပြီး agent ခြေရာကျန်မှုကို လျော့နည်းစေသည်။ Post-virtualization နှင့် post-cloud လုံခြုံရေး architecture များထံမှ အခြေစပြု ပုံစံဖော်ရေးဆွဲထားသော GravityZone သည် physical, virtualized နှင့် cloud ပတ်ဝန်းကျင်များအား ကာကွယ်ရန် တစ်စုတည်းပေါင်းထားသည့် လုံခြုံရေးအုပ်ချုပ်မှု platform တစ်ခုကို ပေးထားသည်။
HyperDetect™ သည် Pre-execution အဆင့်တွင် တိုက်ခိုက်မှုများအား တားဆီးပိတ်ပေးသည်။
Business Security Premium​ သည် hacking tool များ၊ exploit များ နှင့် malware ရှုပ်ထွေးမှု နည်းစနစ်များအား သိမြင်ရန် လေ့ကျင့်ပေးထားသည့် အပြုအမူ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနည်းစနစ်များ နှင့် အထူး local machine မော်ဒယ်များကို သုံးထားသော pre-execution အဆင့်၌ မျိုးဆက်သစ်အလွှာတစ်ခုဖြစ်သည့် HyperDetect နှင့်အတူလာသည်။ ၎င်းသည် ရိုးရာ endpoint နှင့် လူပြောများသော “မျိုးဆက်သစ် AV” ခုခံမှုများ မသိလိုက်သည့် တိုက်ခိုက်မှုများအား ထိရောက်စွာ တားဆီးပိတ်ပေးသည်။
Powershell နှင့် အခြား script အခြေပြု တိုက်ခိုက်မှုများ
တွေ့ရခဲသည့် ခြိမ်းခြောက်မှုများ၏ ရန်မှ ကာကွယ်ရန် HYPERDECTECT နှင့် SANDBOX ANALYZER တို့ မည်သို့အတူတကွအလုပ်လုပ်သည်ကို ကြည့်ရန်
Endpoint ထိန်းချုပ်မှုများ၊ ကြိုတင်ကာကွယ်မှု၊ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှု၊ ကုသဖြေရှင်းခြင်း နှင့် မြင်သာမှု တို့ပါဝင်သည့် ဆီလျော်သော အလွှာလိုက် architecture အား သုံးထားသည်။
လုံခြုံရေး တင်းကြပ်ခြင်း နှင့် ထိန်းချုပ်မှု
Disk အပြည့် စကားဝှက်ခြင်း
လက်မှတ် နှင့် Cloud Lookup
Local နှင့် Cloud ML
HyperDetect ထိန်းညှိနိုင်သော ML
ON & POST-EXECUTION စုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်း
ပိုးသတ်ခြင်း နှင့် ဖယ်ရှင်းခြင်း
စုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်း နှင့် တုံ့ပြန်မှု
အစီရင်ခံခြင်း နှင့် အချက်ပေးခြင်း
Bitdefender ၏ အဆင့်မြင့် endpoint နည်းပညာသည် သင့်နှင့်အတူတွေးပြီး ပုံဖော်ထားသည့် suite များ အတွင်း ပါဝင်ပေါင်းစပ်ထားသည်။
အပြည့်အဝ အလိုအလျောက်ဖြစ်ပြီး မည်သည့်လုပ်ငန်းအတွက်မဆို touch security မလိုပါ
အရေးကြီးခြိမ်းခြောက်မှုများအား ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာစဉ် အလိုအလျောက် ကာကွယ်မှုကို ရှာနေသည့် လုံခြုံရေး-ဗဟိုပြု လုပ်ငန်းများ အတွက်
ခြိမ်းခြောက်မှု ဖြစ်စဉ်တစ်ခုလုံးအား ထောက်ပြရန် ရေးဆွဲထားသော အဆင့်မြင့် ကာကွယ်မှု၊ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှု နှင့် တုံ့ပြန်မှုတို့တွင် အကောင်းဆုံး
ပေါင်းစည်းထားသော Endpoint စုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်း နှင့် တုံ့ပြန်မှု
အကြောင်းရင်းမြစ် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု (historical support ရက် ၉၀ နှင့်အတူ)
အဝေးထိန်း တုံ့ပြန်မှု လုပ်ရပ် (အဝေးထိန်း အကာအကွယ် နှင့် ယာယီစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုခြင်း)
MITRE နည်းလမ်း Tag လုပ်ခြင်း
သံသယဖြစ်ဖွယ် လုပ်ရပ် အချက်ပြခြင်း
Cloud-အခြေပြု Sandbox Threat Analysis
HyperDetect သုံးစွဲသူ-ထိန်းညှိနိုင်သော Machine Learning
malware သွင်ပြင်လက္ခဏာပေါင်း ၈၀,၀၀၀ အပေါ်အခြေခံထားသော On device machine learning
လက်ရှိ မှတ်ဉာဏ်ဖျက်ဆီးခြင်းမှ ကာကွယ်မှု
အန္တရာယ်ရှိ ဖြစ်စဉ် အပြုအမူ တားမြစ်ပိတ်ဆို့ခြင်း
အုပ်ထိန်းမှု Console Cloud သို့မဟုတ် On permise Cloud သို့မဟုတ် On premise Cloud
Suite များအားလုံးတွင် ကာကွယ်မှု အလွှာပေါင်း ၃၀ ကျော် ပါဝင်ထားသည် – အဆင့်မြင့် ခြိမ်းခြောက်မှု ရှင်းလင်းခြင်း၊ Virtualized ပတ်ဝန်းကျင်များအတွက် ဘုံ ကာကွယ်မှု၊ စက် ထိန်းချုပ်မှု၊ ဝက်ဘ် ခြိမ်းခြောက်မှု ကာကွယ်ခြင်း၊ Firewall ၊ Exchange Malware ကာကွယ်ခြင်း၊ အက်ပလီကေးရှင်း အသိအမှတ်ပြုခြင်း (premise ပေါ်တွင်သာ) ၊ အက်ပလီကေးရှင်း နာမည်ပျက်စာရင်းသွင်းခြင်း၊ မိုဘိုင်း စက် ထိန်းချုပ်မှု (premise ပေါ်တွင်သာ)
ထပ်ဆင့် နည်းလမ်းများ –
Disc အပြည့် စကားဝှက်ခြင်း
စီမံပြီးသား Endpoint စုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်း နှင့် တုံ့ပြန်မှု
ESG အစီရင်ခံစာ “ENDPOINT လုံခြုံရေး ထံသို့ သင့်လျော်ပြီး အလွှာလိုက်ဖြစ်သော ချဉ်းကပ်မှုတစ်ခု”
Endpoint ကာကွယ်မှု Platform များ၏ မျိုးဆက်သစ်အတွက် လိုအပ်ချက်များ
ဖိုင်မပါ တိုက်ခိုက်မှုများ ဖြေရှင်းချက် အတိုချုံး
ခြိမ်းခြောက်မှု ပြုသူများသည် ဖိုင်မပါတိုက်ခိုက်မှုများထံ ရွှေ့လာနေကြသည်။ ကျွမ်းကျင်သူများမှနေ၍ ဤတိုက်ခိုက်မှုများသည် endpoint လုံခြုံရေး solution များအားဖြင့် ကြိုတင်ကာကွယ်၍မရနိုင်ဟု သင့်အား ပြောလိမ့်မည်။ Bitdefender တွင် ကျွန်ုပ်တို့သည် ဖိုင်အခြေပြုနှင့် ဖိုင်မပါ malware ခြိမ်းခြောက်မှု အမျိုးစုံတို့ရန်မှ ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝယ်ယူသုံးစွဲသူများကို ကာကွယ်ပေးရန် ကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်တိုင် စိမ်ခေါ်မှုပြုကြသည်။
ELITE အပေါ် AV COMP အစီရင်ခံစာ၊ မတ်လ ၂၀၁၈
Bitdefender သည် AV-Comparatives အား အဆင့်မြင့် Endpoint ကာကွယ်မှု စစ်ဆေးခြင်းတစ်ခု လုပ်ဆောင်ပေးရန် ကော်မရှင်ခပေးခဲ့သည်။ Bitdefender မှ ရွေးချယ်သော Bitdefender Business Security Premium​ Security သည် ပြိုင်ဖက် endpoint ထုတ်ကုန်များ နှင့်အပြိုင် အစစ်ဆေးခံခဲ့သည်။ စစ်ဆေးမှုများအား နိုဝင်ဘာလ ၂၀၁၇ – ဇန်နဝါရီလ ၂၀၁၈ အတွင်း ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
ဆိုက်ဘာ အန္တရာယ် အုပ်ချုပ်မှု
ကျွမ်းကျင်သူများမှနေ၍ အချက်အလက်များ (ရွှေ မဟုတ် ဆီ မဟုတ်) သည် နောက်ပိုင်းနှစ်များအတွင်း ကမ္ဘာပေါ်တွင် အဖိုးအတန်ဆုံးအရာ ဖြစ်လာနေသည်။ အချက်အလက်များ၏တန်ဖိုးမှာ မြှင့်တက်လာသည်နှင့်အမျှ ဆိုက်ဘာ-တိုက်ခိုက်မှုများသည် ခြိမ်းခြောက်မှုတစ်ခုအသွင်ဖြစ်လာပြီး လုပ်ငန်းဦးဆောင်သူများအတွက် ၎င်းတို့ ဦးစားပေးစာရင်း၏ ထိပ်ဆုံးနေရာတွင် မထားမဖြစ် ထားရန်အနေအထား ရှိလာသည်။
SANDBOX ANALYZER နည်းပညာဆိုင်ရာ အတိုချုံး
CREDITSAFE ဖြစ်ရပ်မှန် လေ့လာမှု
ဖြစ်ရပ်မှန် လေ့လာမှု ဖတ်ရန်
CENTERRA GOLD ဖြစ်ရပ်မှန် လေ့လာမှု
“GravityZone Enterprise Security သည် KDFA ၏ physical laptop များ၊ Microsoft Exchange ဆာဗာ၊ Citrix XenServer နှင့် Cirtrix Virtual desktop Infrastructure (VDI) ပေါ်တွင် virtualized လုပ်ထားသည့် ဖိုင် နှင့် အက်ပလီကေးရှင်း ဆာဗာများ၊ နှင့် မိုဘိုင်းစက်များ အတွက် ပြီးပြည့်စုံသော ကာကွယ်မှု ကိုပေးသည်။”
ထပ်ဆင့် ကာကွယ်မှု အလွှာများ နှင့် ဝန်ဆောင်မှုများ
အချက်အလက်မှတ်တမ်းစာရွက် အား ဒေါင်းလုတ် လုပ်ရန် >
GravityZone FDE သည် Windows (BitLocker) နှင့် Mac (FileVault) မှပေးထားသော encryption mechanisms ကိုအားဖြည့်ပေးခြင်းဖြင့် endpoint ၏ hard drive တစ်ခုလုံးအတွက် data ကို ကာကွယ်ပေးသည်။ ၎င်းသည် မူရင်း device encryption ကို အခွင့်ကောင်းယူကာ ဆီလျော်မှုအပြည့်နှင့်မြင့်မားသောစွမ်းဆောင်မှုကို သေချာစေသည်။ GZ FDE အား GravityZone Console နှင့် Agent အဖြစ်ပေါင်းစည်းထားပြီး စေလွှတ်ရန် ထပ်ဆင့် agent မလိုသည့်အပြင် install လုပ်ရန် key management server လည်း မလိုပေ။ Full Disk Encryption ကို ထိန်းချုပ်ရန် ရှိရင်းစွဲ endpoint လုံခြုံရေး တည်ဆောက်မှုကို အသုံးပြုခြင်းက အုပ်ချုပ်မှုပိုင်းဆိုင်ရာအားထုတ်မှု အနည်းငယ်နှင့်အတူ ပြည့်ဝသော ဗဟို စေလွှတ်မှုကို တတ်နိုင်သည်။
Business Security Premium​ အား cloud console နှင့်အတူရရှိနိုင်သည်။ ၎င်းသည် desktop များ၊ laptop များ၊ server များ (physical နှင့် virtual) နှင့် mailbox များအား ကာကွယ်ပေးသည်။ ဆာဗာများသည် ယူနစ်အားလုံး၏ ၃၅% အောက်တွင်သာ ရှိနေသင့်သည်။
ပံ့ပိုးပေးထားသော OPERATING SYSTEM များ -
မှတ်ချက် ၁။ သတ်မှတ်ထားသော kernel version များအား ပံ့ပိုးပေးသည်။ အသေးစိတ်အချက်အလက်များအတွက် ထုတ်ကုန်စာတမ်းအား ကျေးဇူးပြု၍ ကိုးကားပါ။
မှတ်ချက် ၂။ Linux အတွက် Endpoint လုံခြုံရေး HD တွင် HyperDetect module ပါဝင်သော်လည်း Sandbox Analyzer ပေါင်းစည်းခြင်း မပါပေ။
HYPERDETECT MODULE အား အောက်ပါတို့တွင် ရယူနိုင်သည် –
ထိန်းချုပ်စင်တာ အတွက် အနိမ့်ဆုံး HARDWARE လိုအပ်ချက်များ
အဝေး နှင့် မိုဘိုင်း endpoint များထံ ဆက်သွယ်ခြင်း နှင့် update များ အတွက် အင်တာနက် ချိတ်ဆက်ရယူမှု
ENDPOINT HARDWARE လိုအပ်ချက်များ
GRAVITYZONE ထိန်းချုပ်စင်တာ (ON-PREMISE CONSOLE)
GravityZone ထိန်းချုပ်စင်တာအား virtual စက်တစ်ခု အနေနှင့် ထုတ်ပေးထားပြီး အောက်ပါ format များတွင် ရရှိနိုင်သည် –
အခြား format များ နှင့် virtualization platform များအတွက် ထောက်ပံ့မှုအား တောင်းဆိုမှုအပေါ် ရရှိနိုင်သည်။
Business Security Premium​ အတွက် လိုင်စင်တစ်ခုကို ဘယ်လိုရယူရမလဲ ?
Business Security Premium​ သရုပ်ပြတစ်ခုအတွက် တောင်းဆိုရန် ကျေးဇူးပြု၍ ဤ မေးမြန်း ဖောင်ပုံစံ ကို ဖြည့်ပေးပါ။
INSTALL လုပ်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီး အကူအညီ ဘယ်လိုရနိုင်မလဲ ?
သင့် Bitdefender လက်တွဲဖော်များမှ သင့်လုပ်ငန်း အက်ပလီကေးရှင်းများ လိုအပ်သည့် အမြင့်ဆုံး ကာကွယ်မှု နှင့် လုပ်ဆောင်နိုင်မှုတို့အတွက် သင်၏ Bitdefender solution အား install နှင့် configure လုပ်ရာတွင် ကူညီပေးမည့် ကျွန်ုပ်တို့၏ ကျွမ်းကျင်သူများနှင့် သင့်အား ဆက်သွယ်နိုင်ရန် လုပ်ဆောင်ပေးလိမ့်မည်။
MAILBOX များ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုကိုပဲ ကာကွယ်ဖို့ ရွေးပြီး ကျန်အရာများကို မကာကွယ်ပဲ ထားထားလို့ရနိုင်ပါသလား ?
Security for Exchange တွင် mailbox များ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုကိုသာ ကာကွယ်ခြင်း နှင့် သတ်မှတ်ထားသော mailbox များအား လိုင်စင်ပေးခြင်းမှ ပယ်ထုတ်ခြင်း တို့အပေါ် ထောက်ပံ့မှုမပေးထားပါ။ Security for Exchange အား အကာအကွယ်ရှိသည့် Exchange ဆာဗာ နှင့်သက်ဆိုင်သော Exchange အဖွဲ့အစည်းကို ကာကွယ်ပေးရန် ရေးဆွဲထားခြင်းဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ ၎င်းသည် အသုံးပြုသူ/အခန်း/စက်ပစ္စည်း/ခွဲဝေသုံးသော mailbox များ ပါဝင်သည့် လက်ရှိ mailbox အားလုံးကို အကာအကွယ်ပေးသည်။ လုံခြုံရေးအကြောင်းပြချက်များအတွက် ၎င်းသည် mailbox အားလုံးကို ကာကွယ်ရန် အကြံပြုခံထားရသည်။ သို့မဟုတ်လျှင် malware သည် အကာအကွယ်မလုပ်ထားသော mailbox များသုံးပြီး သင့်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်မှုအတွင်းသို့ ဝင်ရောက်နိုင်ကာ အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုလုံးအတွင်း ပျံ့နှံ့သွားနိုင်သည်။
ELITE မှာ ကျွန်ုပ် ထပ်ဖြည့်နိုင်တဲ့ ထပ်ဆင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာများ ရှိပါသေးသလား ?
မည်သည့် Bitdefender endpoint solution ကိုမဆို ကာကွယ်ခြင်းကဏ္ဍများ တိုးမြှင့်ရန် သင်သည် ကာကွယ်မှုအလွှာများကို ပိုမို ထပ်ဖြည့်နိုင်သည်။ သင့်အနေနှင့် သင်၏ Windows OS နှင့် အက်ပလီကေးရှင်းများ နောက်ဆုံးပေါ်ဖြစ်နေစေရန် Patch အုပ်ချုပ်မှု၊ သို့မဟုတ် သင့် endpoint များပေါ်တွင်ရှိနေသော အချက်အလက်များကို ကာကွယ်ရန် Full Disk Encryption တို့ကို ထပ်ဖြည့်နိုင်သည်။ (-> Patch Management၊ Full Disk Encryption၊ HVI)
အကယ်၍ သင် Business Security Premium​ Protection ကိုသုံးစွဲကြည့်ချင်လျှင် ဤနေရာ၌ အလျင်အမြန်အစပြုလိုက်ပါ –
သင် ကာကွယ်ပေးလိုသည့် စက်စုစုပေါင်း (လက်ပ်တော့များ၊ ကွန်ပျူတာများ၊ ဖိုင် နှင့် မေးလ်ဆာဗာများ သို့မဟုတ် မိုဘိုင်းစက်များ*) အလုံးအရေအတွက် ၅ လုံး မှ ၁၀၀ လုံး အကြား ရွေးချယ်ပါ။
စက်အလုံးပေါင်း ၁၀၀ ကျော် အတွက် ရှာနေပါသလား။ ကျွန်ုပ်တို့ထံ ဤနေရာတွင် ဆက်သွယ်ပါ။